आइतबारदेखि एक साताका लागि बेनी अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार आइतबारदेखि एक साताका लागि बेनी अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द
२०७८, ७ माघ शुक्रबार १७:५२
बेनी अस्पतालका अधिकांस चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि आगामी आइतबारदेखि एक साताका लागि बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) सेवा बन्द गरिने भएको छ । अस्पतालमा चिकित्सक सहित २३ जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि माघ ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म ओपीडी सेवा बन्द गरिने अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले बताउनुभयो ।
‘ओपीडी सेवाका लागि जनशक्तीको अभाव छ,‘संक्रमति सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ’ डा. कँडेलले भन्नुभयो । अस्पतालमा कोरोनासँग लक्षण मिल्ने बिरामीलाई बिश्रामस्थलमा फिबर क्लिनिक सञ्चालन गरिने छ । कोरोना संक्रमणकै कारण जनशक्ति अभाव भएपनि जटिल सल्यक्रिया, प्रसुती सहितका सेवाहरु भने सञ्चालन हुने छ।
एकैपटक अस्पतला भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएपनि अति आवश्यक सेवाहरु भने निरन्तर उपलब्ध रहेको बेनी अस्पतालले जनाएको छ । आकस्मिक कक्ष सहित फिबर क्लिनिमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमणमुक्त भएकाले ढुक्क भएर सेवा लिन समेत अनुरोध गरिएको छ। यसैबीच एक सातापछि सहज अवस्था नभएमा अस्पतालले हेल्लो डक्टर सहितको थप सेवाहरु सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
Previous articleआज शुक्रबारदेखि सेवा पाउन खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य
Next articleलायन्स क्लबको प्रथम भ्वाइस ड्रिस्ट्रिक्ट गर्भनरमा म्याग्दीका चन्द्र केसीको उम्मेदवारी घोषणा